Annaga |Hal qayb oo ka mid ah Fujian Anxi Flyingsparks Crafts Co., Ltd.
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay laba qaybood oo ah qaybta wax-soo-saarka unugga iibka.Waxaa ka baxa in ka badan 100 qof oo ku jira ganacsigayaga.Tan iyo markii la aasaasay kooxdayada, waxaan u heellannahay inaan sameyno unug qurux badan si loo daboolo baahida suuqyada.
Waxaan si daacad ah kuugu martiqaadeynaa shirkadeena si aad ula kulanto isbeddellada iyo naqshadaha cusub, waxaan leenahay inaan ku siinno maqaal qurux badan oo ugu dambeeyay tayada ugu sareysa qiimo macquul ah macaamiisheena.
Nidaamka badeecada oo dhami waxa uu ku jiraa jawi degan waxaana dhiirigelinaya noocyada kala duwan ee soo jiidashada leh ee noocyada kala duwan ee mawduucyada iyo sidoo kale dayrta iyo maqaallada x-mas '.
Shaqaalahayaga xirfadlayaasha ah ayaa ku farxi lahaa inay ku caawiyaan.
Waxaan rajaynaynaa booqashadaada.
FUJIAN ANXI FLYINGSPARKS CRAFTS CO., LTD waxay ku taal Anxi Town, Gobolka Fujian, Shiinaha.Waxa jira in ka badan 30 aqoon-is-weydaarsiyo qandaraas ah, oo daboolaya in ka badan 6,000 mitir oo laba jibbaaran.